Listings in အလှကုနျ in မဟာအောငျမွမွေို့နယျ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in အလှကုနျ in မဟာအောငျမွမွေို့နယျ
Maha Aung Myay Township History and Boundaries
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် သည် မန္တလေးမြို့၏ မြို့လယ်တွင် တည်ရှိပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း (၁၈) ရပ်ကွက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်တို့နှင့် နယ်နိမိ ...
Maha Aung Myay Demographic & Economic Activities
Total Population 241,113*
Sex Ratio 94 males per 100 females
Area (km2) 14.8**
Population Density (persons per km2) 16287.7 persons
Number Of wards 18
Mean Household Size 5.2 persons ***
Maha Aung Myay Business Sectors
Maha Aung Myay Employees Sectors
in အလှကုနျ, စာရေးကိရိယာဆိုငျ
in အလှကုနျ, ဖကျရှငျဆိုငျမြား
Angelic Girl Fashion
09-91021992, 09-256119599, 09-258776722
E & H Cosmetic
09-402503226, 09-445518082, 09-420233872
in အိတျအမြိုးမြိုး (အခွား), အလှကုနျ
Majesty Family International Co.,Ltd. [Catrice Cosmetics]
Marry Max Co.,Ltd. [Masuri]